On isibonelo Cinderella, sezwa ukuthi isihlangu ikakhulukazi incike impumelelo abesifazane. Namuhla Umqeqeshi akuyona udumile, akukho Fairies, kodwa izicathulo zabesifazane nge High Heels hhayi kakhulu besesitelekeni ukwehlukana kwayo.
Ukubheka indlela kalula amantombazane ahambe phezu High Heels, okubangela injabulo futhi ukujabulisa iso, kubonakala sengathi lokhu isihlangu esivumelana kakhulu ngempela. Nalokhu, yebo, kungenzeka ukuba ngiphikisane naye, kodwa namanje - a Izicathulo kungenza kube isinqumo esihle.
nezicathulo Good oqinisekise maphakathi gravity, kube isisindo, ematheni oyindilinga, uzwane roundness lesifanele. ichaze Kusobala kwemigomo isici ngasinye akunakwenzeka, ngoba ingxenye enkulu bathembele izici ngazinye izinyawo zesifazane. Njengomthetho, khona-ke, indlela ukhululekile ngandlela izicathulo, nezinye izinto ithonya ngokwezinga elikhulu - ezifana isicathulo ukubona, ukuhamba indlela yekuma, isilinganiso ubude nesisindo ke iphi isikhungo sethu gravity. Izimali zonke lezi izinkomba kuzosiza baqonde ukuthi kumele kube izicathulo ne izithende futhi, okubaluleke kakhulu, ukusiza ukuchaza umngcele ukuphakama kwalo.
Indlela ukukhetha izicathulo ukhululekile High Heels
Kukhona ezinye imithetho, kulandela okuyinto uyokwazi ukubona ukuthi uyaludinga yini imodeli abakhethiwe esifanelana nonyawo lwakho, kuze kufike nezicathulo kuyinto qualitative, futhi ukuqagela bangaki pair ukhonza. Ziyini lezi zimiso?
Okokuqala, sinake kuphela, uma kuba acwebezelayo futhi bushelelezi ngokubukeka - ukulahla umbhangqwana, ngoba ematheni kuyinto contact ukukhanya nge ebusweni, ngenxa okuzokwenza ezitjhelelako. Ukuya izicathulo enjalo kungaba ezingaphephile.
Okwesibili, sinake isisindo. Isisindo izicathulo obuhle izithende noma platform kuyoba sihluke kakhulu elinegazi yekhwalithi ephansi. "Lungisa" nezicathulo, nakuba ukubukeka omkhulu, kuyodingeka isisindo kancane. Yebo, kungenzeka ukuba kukhona ngeke kusadingeka athwale isisindo esengeziwe, kangangokuba kwakunzima ukuba ngime e izicathulo nge umlenze isigqugquzeli imizuzwana eyishumi. Lalela imizwa yakho yangaphakathi: uma namanje kalula - izicathulo ngawe, uma kwaba nzima - yokusesha uyaqhubeka. Uma ungazizwa ukungakhululeki emva inqubo - Hamba uyothenga. Gait kwakho kushintshile, hhayi eceleni samuyuluchshuyu? Ube phala, ukudonsa imilenze nokunye okunjalo? Khona-ke, lo imodeli engenzi ivumelane wena.
Okwesithathu, ukuphakama isithende. Ngakolunye uhlangothi, i- ephakeme esithendeni, ngcono - ke zibukeke yinde umlenze futhi kwenza sibalo slimmer. Kodwa ngakolunye uhlangothi, ayanda sibi - kungenzeka sikhubeke noma siwe iyakhula. Lokho akuzange kwenzeke kanjalo, ahlole pair ezikhethwe ngokucophelela. Ngokuvamile, izicathulo ne High Heels kakhulu, kukhona platform evumela ukuthi wena ukwenza imodeli esikahle futhi ezisebenzayo. Kodwa ngokuvamile kadluka ukuphakama ayihambisani ukuphakama yesikhulumi, okuyinto luhambisana nomthwalo nemiphumela kahle. Kahle kahle, umehluko phakathi platform kanye isithende kufanele kube 5-7 cm. Nokho, le nhlanganisela ngempela ezingavamile. Isiteji Ubuye izici: ingxenye ekhaleni lingavuswa noma ezishaywayo nalo lonke ingxenye. Kakhulu isithende high kungahlali kahle nge yedwa flat - kungenza Gait Clumsy, ikakhulukazi lapho imilenze usukhathele.
Okwesine, kukhona izinto ezifana ukuzinza. Ukuze ukugqoka ngokuphepha isithende kwanoma iyiphi ukuphakama, owesifazane kufanele abe isikhungo lesifanele adonsela phansi, ukuma okuhle futhi Gait, ukuqeqeshwa ngokomzimba anele ngisho ngilulekela. Uma into izinkinga ngenhla, kubalulekile ukuba ubheke ukuphakama umkhawulo esithendeni.
Kubalulekile futhi acabangele isilinganiso ubude nesisindo abesifazane, khona noma yisiphi isifo enhlanganisweni yebhantshi lensimbi, emilenzeni noma emgogodleni, kanti ezinye nezinye izinto ngabanye.
isicathulo ku-cm futhi isithende
Ngokuvamile sibhekene yokukala izicathulo ngamasentimitha, kodwa bangaki akwazi ukuxoxa ukuze ubude unyawo isicathulo? ngeke usayizi 36 ngezinyawo ku-cm kangakanani? Kukhona indlela ethile yokuma, esingakwazi kalula ukuthola amatafula. Ngokusho kwabo, njalo isigamu isentimitha ungeze isigamu usayizi, isibonelo, ubukhulu 37 izinyawo uzobona 23.5 no-24 cm - kukhona, ngokulandelana, 37.5 nokunye.
Kodwa lokhu akulona ukuxhumana eyingqayizivele, okuyinto odinga ukukwazi - kukhona futhi iphethini phakathi isicathulo futhi isithende ukuphakama. Ngakho, uma uthenge izicathulo ne izithende at 5-9 cm, bese ukhetha nengxenye yayo usayizi ezinkudlwana. Uma ukuphakama isithende sika 10-15 cm - kubalulekile ukuthatha pair elilodwa ubukhulu emikhulu. Uma lingaphezulu kuka-16 cm - 1.5 ngaphezulu. Ngakho, uma usayizi esicathulweni 38 futhi ukhetha izicathulo ne 12-isentimitha izithende - ukuthenga usayizi 39 imodeli.
izicathulo uqondanise kahle ngokuqinisekile kuyoba umhlobiso elula futhi kunengqondo imilenze yakho.
Indlela yokwenza imali ku imfundamakhwela stock exchange ekhaya ngaphandle utshalomali nokukhohlisa: Izibuyekezo
Amakhowe eyayigcwele. izitsha Italian futhi French